वसन्त कालमा छु राज्यमा एकजना नामी संगीतकार थिए। उनको नाम यु पो या थियो। वाल्यकालमा यु पो या निकै चलाख थिए। संगीतमा रुची भएका कारण उनले तत्कालीन निकै प्रसिद्ध संगीतकार छङ ल्यानसँग संगीत सिक्नथाले।
तीन वर्षसम्मको अभ्यासपछि यु पो या राम्रोसँग बजाउनसक्ने भैसेकका थिए। यसरी उनी त्यस स्थानका नामी वादक बने। तर यु पो यालाई दुःख लागेको कुरा के थियो भने कला क्षेत्रमा उनी अझै उच्च स्थानमा पुग्न सकेका थिएनन। यु पो याका शिक्षक छङ ल्यानलाई उनको चिन्ताका बारेमा थाहा भएपछि उनले युसँग सोधे "मैले आफूसँग भएको सबै ज्ञान तिमीलाई सिकाएँ। तिमी राम्रोसँग बजाउन सक्छौं। तर संगीतको बुझाइको क्षेत्रमा म अलकि कमजोर छु। मेरा शिक्षक फाङ च छुन यस क्षेत्रमा एकदमै दक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्वी समुद्रस्थित एउटा टापूमा बस्नुहुन्छ। तिमी मसँगै त्यहाँ गएर उहाँसँग अझ गहन रुपमा संगीत सिक्छौ त?" शिक्षकको यो कुरा सुनेर यु पो यालाई अत्यन्तै खुशी लाग्यो। उनले तुरुन्तै पटक-पटक "हवस, हवस" भने।
उनीहरुले यथेष्ठ खाना तयार गरी डुंगामा चढे र पूर्वी समुद्रतिर लागे। एक दिन उनीहरुको डुंगा पूर्वी समुद्रमा पर्ने फङ लाइ पर्वत पुग्यो। छङ ल्यानले यु पो यालाई भनेः "तिमी यहाँ बसेर पर्ख। म मेरा शिक्षकलाई बोलाउन गएँ। तुरुन्तै फर्कन्छु।" धेरै दिन बितिसक्यो, तर छङ ल्यानको डुंगा अझै फर्केन। यु पो याको मन दुःख्यो। उनले समुद्रतिर हेरे। उनले समुद्रका अग्ला-अग्ला छाल देखे भने आफ्नो पछाडिको टापूमा जंगलमा निकै शान्त भएर चराचुरुङ्गीले दुखीत गीत गाइरहेका जस्तो सुने। यस्तो वातावरणले यु पो याको मन छोयो। उनले आफ्नो भावना व्यक्त गर्न एउटा संगीत बजाए। त्यस बेलादेखि यु पो याले अझ राम्रो र गहन भावनाका साथ संगीत बनाउन सके। वास्तवमा उनका शिक्षक छङ ल्यानले भावनाको खोजीमा यु पो यालाई एक्लै प्रकृतिमा छोडेका थिए।
यु पो या टापूमा एक्लै समुद्रका छाल र वन-जंगल अनि चराहरुसँग बसे। प्रकृतिका कारण उनको मिजास परिवर्तित भयो। उनले संगीतको वास्तविक शक्तिलाई बुझे। त्यसपछि यु पो या वरिष्ठ संगीतकार बने। तर पनि उनको संगीतलाई बुझ्ने मानिस भने निकै कम थिए।
एक दिन, यु पो या डुंगामा बसेर नदीमा सयर गरिरहेका थिए। एउटा पर्वत नजिक पुग्दा अकस्मात पानी पर्नथाल्यो। पानीले भिज्नबाट जोगिनका लागि उनले डुंगालाई पर्वत नजिक लगे। पानी परिरहेको आवाज सुनेर अनि आफ्नै आँखा अगाडि नदीमा पानीका थोपा खसेको जीवन्त दृश्य देखेर यु पो याले बाजा बजाउन थाले। बजाउँदा-बजाउँदै उनले आफ्नो बाजाको तारमा असामान्य अवस्थाको अनुभव गरे जुन कसैले नजिकैबाट त्यो संगीत सुनिरहेको प्रतीक हो। यु पो या डुंगाबाट बाहिर निस्के र किनारको जंगलमा एकजना दाउरे बसिरहेको देखे।
यु पो याले दाउरेलाई डुंगाभित्र लगे। दाउरेको नाम चुङ च छी थियो। यु पो याले भनेः "म तपाईंका लागि एउटा सङ्गीत बजाउँछु।" चुङ च छीले ध्यान दिएर सुने। यु पो याले चुङ च छीका लागि एउटा "पहाड" नामक गीत बजाए। चुङ च छीले त्यसको प्रशंसा गरेः "कति अग्लो पहाड रहेछ!" यु पो याले एउटा " बगिरहेको नदी" नामक गीत बजाए। चुङ च छीले अचम्म मान्दै भनेः "कति शक्तिशाली नदी रहेछ!" यु पो याले गदगद भएर भनेः "विश्वमा मेरो संगीत बुझ्ने व्यक्ति तपाईं नै हुनुहुन्छ।" त्यसपछि उनीहरुले एकले अर्कालाई दाजु-भाइ भन्नथाले।
उनीहरुले यु पो याले सयर गरिसकेपछि उनी चुङ च छीको घर जाने निर्णय गरे। एक दिन यु पो याले निर्धारित योजना वमोजिम चुङ च छीको घर पुगे। तर चुङ च छीको भने त्यति बेला गम्भीर रोग लागेर स्वर्गेबास भैसकेको रहेछ। यो कुरा थाहा पाएर यु पो यालाई असाध्यै दुःख लाग्यो। त्यसपछि उनले चुङ च छीको समाधि अगाडी बुसेर उनका लागि एउटा अति दुखित गीत बजाए। गीत सिध्याएपछि यु पो या जुरुक्क उठे र चुङ च छीको समाधिअगाडी आफ्नो मूल्यवान बाजा ध्वस्त पारे। त्यसपछि यु पो याले कुनै पनि बाजा छोएनन।